🥇Forex စျေးကွက်အချိန်များ - ဇွန်လ 2022 ခုနှစ် FX အရောင်းအ၀ယ်ကဏ္ဍများအတွက် လမ်းညွှန်
Forex Market Hours - FX Trading Sessions အပေါ်လမ်းညွှန်
လူတိုင်းငွေကြေးကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရှာဖွေနေသည်။ သို့သော်အိပ်မောကျသောစျေးကွက်တစ်ခု၊ နေ့အလင်းရောင်ချွေတာသည့်အချိန်နှင့်စဉ်းစားရန်မတူညီသောအချိန်ဇုန်များ၌တည်ရှိသည့်ဖလှယ်မှုများ - သိခြင်း အခါ, Forex ကုန်သွယ်ရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် Forex session အမျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်သောအခါ။
ဆိုလိုတာကဘာလဲ Forex စျေးကွက်?
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောသူများသည်စောင်ရန်းရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများ၊ ဗဟိုဘဏ်ကြီးများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာများစသည့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ပျမ်းမျှဂျိုးကုန်သည်များရှိသည် - လက်လီဖောက်သည်များဟုလူသိများသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်များသည်အမြဲတမ်းနီးပါးဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အလို့ငှာတစ်ချိန်တည်းမတူညီသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများသည်တစ်ပတ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ပြီးပိတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ငွေကြေးကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ကုန်သွယ်ရန်အသင့်တော်ဆုံးလဲ၊ မည်သည့်စျေးကွက်များဖွင့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇုန်အတွင်းတည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
ကမ္တာ့ Forex Market က Sessions
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံး GMT ကိုစံသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇုန်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရာများကိုရိုးရှင်းစွာထားရှိမည်။ ထို့ကြောင့်သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ နာရီထပ်ပေါင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဈေးများသည်မတူကွဲပြားသောအချိန်များ၌ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည် ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ကြီးလေးခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ စျေးကွက်တိုင်းသည်အနည်းဆုံးတစ်နာရီအတွင်းထပ်တူကျနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
တိုကျို / အာရှ Forex စျေးကွက်
ကုန်သွယ်မှုရက်သတ္တပတ်၏အစကိုအာရှစျေးကွက်များကစတင်ခဲ့ပြီးမကြာခဏ 'တိုကျိုအစည်းအဝေးများ' ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ တိုကျိုမြို့တော်၏စျေးကွက်များသည် ၀၀း၀၀ မှ ၆း၀၀ အကြားတိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည် အထူးသဖြင့်အာရှစျေးကွက်များ၏အစနှင့်အဆုံးသည်တိုကျိုအစည်းအဝေးထက် ကျော်လွန်၍ ကျယ်ပြန့်သည်။
ဤသည်အစား 23:00 ကနေ 08:00 ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရုရှား၊ နယူးဇီလန်၊ တရုတ်နှင့်Australiaစတြေးလျနိုင်ငံများရှိစျေးကွက်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဤအချိန်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည်။
အာရှအစည်းအဝေးများအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် ရောင်းဝယ်လေ့ရှိသော အဓိကအတွဲအချို့ ပါဝင်သည်။ AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPYနှင့် NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ. ထို့ကြောင့် သင်သည် JPY အပါအဝင် ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ပါက၊ ဤနာရီများအတွင်း ပမာဏများစွာ ပိုများသည်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
လန်ဒန် / ဥရောပ Forex Market ကနာရီ
အထက်ဖော်ပြပါအာရှစျေးကွက်များမတိုင်မီလေးတွင်ဥရောပသားများရှင်သန်လာကြသည်။ လန်ဒန်မြို့အတွက်ရုံးဖွင့်ချိန်သည် ၇း၃၀ မှ ၁၅း၃၀ ဖြစ်သော်လည်းအစည်းအဝေးများသည်ထိုထက်မကသောအချိန်ဖြစ်ပြီး ၇း၀၀ မှ ၁၆း၀၀ အထိဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအခြားဖလှယ်မှုများရှိနေခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးနေ့အတွက်ငွေကြေးစျေးကွက်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်မတည်ငြိမ်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဟုလန်ဒန် Forex စျေးကွက်နာရီနှင့် New York ကြားရှိအချိန်ကာလသည်အများအားဖြင့်ထပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်တိုကျိုနှင့်ဆစ်ဒနီစျေးကွက်များမပိတ်မီနှင့်လန်ဒန်ဖွင့်လှစ်သည်အထိ Forex ကုန်သည်များသည်ယင်းကိုစီးရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
နယူးယောက် / မြောက်အမေရိက Forex စျေးကွက်
အာရှစျေးကွက်များပိတ်ပြီးနောက် နာရီအတော်ကြာပြီးနောက်၊ ဥရောပအစည်းအဝေးများ တစ်ဝက်ခန့်တွင် မြောက်အမေရိက Forex စျေးကွက်များသည် ခုန်ပျံကျော်လွှားသွားခဲ့သည်။ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အနာဂတ်၊ စီးပွားရေး ထုတ်ဝေမှုများ၊ နှင့် ကုန်စည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် - ဤစျေးကွက်များ 12:00 တွင်စတင်သည်
ထို့ကြောင့်အမေရိကန်စျေးကွက်များပိတ်ပစ်သောအချိန်နှင့်အာရှစျေးကွက်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တို့အကြားသိသိသာသာကွာဟမှုရှိသည်။ ၂၀:၀၀ နာရီတွင်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းတရားဝင်ပိတ်လိုက်သည်
ဆစ်ဒနီ Forex စျေးကွက်
NYSE ပိတ်ပြီးနောက် ၂၁:၀၀ နာရီတွင်ဆစ်ဒနီစျေးကွက်များပွင့်နေပြီး 21:00 တွင်ထပ်မံပိတ်သည်။ မည်သည့်အချိန်၌တိုကျိုစျေးကွက်များတက်လာနေသည်။
Sydney စျေးကွက်နာရီများကို မငြိမ်မသက် အနည်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး ထို့ကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း ကုန်သည်များအတွက် စံပြမဟုတ်ပေ။ ဉီးခေါင်းရေ နှင့်ထိုကဲ့သို့သော
စျေးကွက် - အချိန်ချွေတာသည့်အချိန်
DST (Daylight Saving Time) သည် Forex စျေးကွက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်နာရီသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်သွားမည်ကိုသတိပြုခြင်းသည်စျေးကွက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အရှေ့အာရှအများစုသည်နေ့အလင်းရောင်ချွေတာခြင်းကိုမစောင့်ကြည့်ကြသော်လည်းနိုင်ငံအစုအဝေးများကထိုသို့ပြုကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၁ နာရီ၊ ၄ နာရီသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကဲ့သို့သောအချိန်အတိအကျကိုမီးမောင်းထိုးပြဇယားကိုလေ့လာခြင်းသည်သင်မှားယွင်းသောအချိန်ကာလကိုတိုင်းတာသည်ကိုသိရှိရန်သာဖြစ်သည် နာရီ!
မတည်ငြိမ်သော Forex Market နာရီအများစု
အာရှ Forex စျေးကွက် 00:00 နာရီခန့်တွင်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါလူသစ်များသည်ကုန်သွယ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ တကယ်တော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည့်ငွေကြေးကုန်သည်များသည်ပထမ ဦး ဆုံးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းအမှာစာများကို ၀ ယ်ယူရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နည်းပါးသော ငွေဖြစ်လွယ်မှုသည် မတည်ငြိမ်မှုကို မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်စေသည်။ န့်.
အများဆုံး Forex Market ကနာရီ
ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အရှိန်အဟုန်တို့နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းသည်စျေးကွက်ဖွင့်ပွဲ၏ပထမ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ လန်ဒန်၊ ဥရောပ၊ နယူးယောက်၊ မြောက်အမေရိကစသည်တို့ကိုစဉ်းစားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, မတည်ငြိမ်မှုအမြဲဒီဂိမ်းထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် TOTH (Top Of The Hour) တွင်ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းအချို့ကိုသင်ဖမ်းချင်လိမ့်မည်။
၎င်းကိုကုန်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းအကြားလူသိများပြီးကုန်သွယ်ရေးနေ့အတွင်း၌နာရီတိုင်း၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံး ၅ မိနစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအချိန်တွင်သင်သည်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Forex စျေးကွက်နာရီ - အောက်ခြေလိုင်း
Forex ကုန်သွယ်သောအခါစျေးကွက်ကိုကောင်းစွာအချိန်ကုန်ခံခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ဟာ session တစ်ခုဘယ်အချိန်ပိတ်ပြီးပြီဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအဆုံးသတ်ကိုမကူနိုင်တော့ပါ။ သင်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ FX pair ပေါ် မူတည်၍ မတည်ငြိမ်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်မှာပါ။
သင်၏ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇုန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် forex စျေးကွက် နာရီများကို ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် Daylight Saving Time တွင် မည်သည့် ပြောင်းလဲမှု မဆို session တစ်ခု၏ အဖွင့်နှင့် ပိတ်ချိန်များကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ကြည့်ရှုနေသည့် စျေးနှုန်းဇယား အချိန်ဘောင်များကိုလည်း ချိန်ညှိရပါမည်။
ငါနာရီပြီးနောက် Forex ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးရှိစျေးကွက်များနှင့်အချိန်ဇုန်များထပ်နေသောကြောင့် Forex ကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
အဓိက Forex စျေးကွက်အစည်းအဝေးများကဘာတွေလဲ?
အဓိက Forex ကုန်သွယ်ရေးအစည်းအဝေးများမောင်းနှင်ရန်စဉ်းစားဖလှယ်မှုလေးရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင်တိုကျို / အာရှ၊ နယူးယောက်၊ အမေရိကန်၊ လန်ဒန် / ဥရောပနှင့်ဆစ်ဒနီတို့ပါဝင်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်နည်းသောလူ ဦး ရေနည်းသောကြောင့်ညအချိန်တွင် Forex သည်ကျယ်ပြန့်သည်။